Zaambiyaan konkolaattoota qaraxa osoo hin kaffalin mi'a galchan dirooniin to'ataa jirti - BBC News Afaan Oromoo
Zaambiyaan konkolaattoota qaraxa osoo hin kaffalin mi'a galchan dirooniin to'ataa jirti
Goodayyaa suuraa Xiyyaara diroonii hanna taaksii to'atan
Anga'oonni gibiraa Zaambiyaa xiyyaara nam-maleessatti (dironii) fayyadamuun konkolaattota fe'umsaa gurguddoo ashuuraa otoo hin kaffaliin meeshaalee galchan ittiin to'achuu eegalan.
Abbaan Taayitaa Galiiwwan Zaambiyaa (ZRA) guyyoota dhumatorbee keessa Kaaba biyyattiitti konkolaattota fe'umsaa torba daandiirraa miliquun bosona keessa dhokatanii turan, dirooniin adda baasuun to'annoo jala olchaniiru.
''Dironiin daandiiwwan wal xaxaa ykn balaafamaa bakka to'annoof dhibaa ta'ee wirtuun sakatta'insaa qabu dadhabe ykn to'annoo lafarraaf rakkisaa ta'etti ramadaman,'' jechuun maanejarrii korporeet Kominikeeshinii Abbaa Taayitichaa Toopsii Sikalindaan BBC tti himan.
''Daandii Kapiri-Serenje'tti diroonii bobbaasuun, daandiin guddaan konkolaataan akka irra hin jirree duwwaa wayita ta'u, daggala keessa, daandiirraa fageenya kiilomeetira 14 irra garuu sochii wahii argan.''
Konkolaattoonni karaa kibba biyyattii imalan biyyoota ollaa akka DR Koongoo, Maalaawii ykn Taanzaaniyaarraa dhaqanii deeebi'u.
Konkolaachistoonni mi'asaanii daggala keessatti harcaasaanii konkolaattoota xixiqqoodhaan fe'anii akka bira darban Aabba Sikalindaan himaniiru.
''Wayita qaraxa hin kaffaliin miliqaa turanitti daldala biyya keessaa nutti fakkaata ture,'' jedhan.
Abbaan Taayitaa kun - ZRA teeknoolojiii kanatti fayyadamuun galii biyyatti akka guddisu abdii qabaachuu beeksise.
Dhaabbata Daldala Adduunyaa
Xiyyaara fageenyaa to'atamu
Tekinooloojii: Qorichoota talaallii dirooniin imalan
Hojiiwwan torba teeknoliijiin bakka namaa bu'e hojjetu
Dhaabbanni Google Wing tajaajila dirooniin waan barbaachisu dhiyeessuu jalqabe
Viidiyoo ''Dhukkuboonni qaroo ijaa nama dhabsiisan hedduun yaalamuu kan danda'aniidha''
Raafamni xiyyaara Kaanadaa mudate namoota 35 madeesse